गुल्मीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध अन्तरक्रिया, के भन्छन् दलित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरु ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
गुल्मीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध अन्तरक्रिया, के भन्छन् दलित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरु ?
गुल्मीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “सबैका लागि घर–घरमा मानव अधिकार शान्ति र विकासको मुल आधार” भन्ने नाराका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ललितपुरको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले गुल्मीमा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको बारेमा जानकारी गराए । उनले दलित समुदायलाई अरु गैर दलितलाई जस्तै समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
दलितले पनि गैर दलितले जस्तै आफ्नो हक अधिकार खोजेका छन उनले भने –“दलित समूदाय बच्चाहरुलाई दलित र छुवाछुत भन्ने शब्द नसुनाउने ।” पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा दलितको नाममा धर्म परिवर्तन गराएको, दलित समूदायमा अत्याधिक मात्रामा भ्रम छर्ने काम भईरहेको बताउँदै हामीले यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला अदालत गुल्मीका न्यायाधीश राम प्रसाद न्यौपानेले वर्तमान समयमा ज्ञान नै शक्ति भएको बताउँदै अहिलेको समय भनेको ज्ञानको प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हो । अब पनि यस्ता विभेद्मा कोही अल्झीन नहुने भन्दै यसको सुरुवात सामाजका अग्रजबाटै गनुपर्ने बताउँदै यस्तो समस्या भए पनि पीडितहरु न्यायको ढोका सम्म आउन नसकेको बताए ।
अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा वक्ताहरुले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अत्यधिक हुनुको मुख्य कारण अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता र गरिबी भएको बताए ।